ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ရေးလိုင်း - YiZheng Heavy Machinery Co. , Ltd.
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင်အတွေ့အကြုံပြည့်ဝစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ရှိလုပ်ငန်းစဉ်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုစီအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရုံတင်မကထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတစ်ခုစီ၏လုပ်ငန်းစဉ်အသေးစိတ်များကိုလည်းအမြဲတမ်းနားလည်ပြီးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုအဆင်ပြေစွာဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ဖောက်သည်များ၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစိတ်ကြိုက်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာလိုင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်ပေးသည်။
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည် Yuzheng Heavy Industries နှင့်သင်၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏အဓိကအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းစဉ်ဒီဇိုင်းနှင့်ဗုံ granulation ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ၏ပြီးပြည့်စုံအစုထုတ်လုပ်သည်။
ဖုန်းနံပါတ် + 86-18621801335
ရှုပ်ထွေးသောဓာတ်မြေသြဇာသည်ပေါင်းစပ်ထားသောဓာတ်မြေသြဇာဖြစ်ပြီးနိုက်ထရိုဂျင်၊ ဖော့စဖရပ်နှင့်ပိုတက်စီယမ်တို့ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်ဓာတ်မြေသြဇာတစ်ခု၏အတိုင်းအတာအရရောဓာတုဓာတ်ပြုမှုဖြင့်ပေါင်းစပ်သည်။ အာဟာရပါဝင်မှုသည်တူညီပြီးအမှုန်အရွယ်အစားမှာတူညီသည်။ ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်ဒြပ်ပေါင်းအမျိုးမျိုးသောဓာတ်မြေသြဇာကုန်ကြမ်းများရောစပ်ခြင်းနှင့်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ပေါင်းစပ်သောဓာတ်မြေသြဇာများသည်ယူနီဖောင်း၏ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ၊ တောက်ပသောအရောင်၊ တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေးနှင့်ကောက်ပဲသီးနှံများမှအလွယ်တကူစုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိသည်။ အထူးသဖြင့်မျိုးစေ့များမြေသြဇာကြီးထွားရန်အတွက်အလွန်လုံခြုံသည်။ ပြောင်းနှင့်ဂျုံ၊ ပြောင်း၊ ဖရဲသီးနှင့်သစ်သီး၊ မြေပဲ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ပဲ၊ ပန်း၊ သစ်သီးနှင့်အခြားသီးနှံများအတွက်သင့်လျော်သည်။ ၎င်းသည်အခြေခံဓာတ်မြေသြဇာ၊ ဓာတ်မြေသြဇာ၊ ဓာတ်မြေသြဇာလိုက်၊ မြေသြဇာနှင့်ဆည်မြောင်းအတွက်သင့်တော်သည်။
ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုအတွက်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများတွင်ယူရီးယား၊ အမိုးနီးယားကလိုရိုက်၊ အမိုးနီးယမ်ဆာလဖိတ်၊ အမိုးနီးယားအရည်၊ အမျိုးမျိုးသောအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကိုမြေဆီလွှာလိုအပ်ချက်နှင့်အညီထည့်သွင်းထားသည်။
၁။ တိရိစ္ဆာန်မစင်များ - ကြက်၊ ဝက်မစင်၊ သိုးမွှေး၊ တိရစ္ဆာန်များသီဆိုခြင်း၊ မြင်းချေး၊ ယုန်မြေ etc. ဇာစသည်တို့ဖြစ်သည်။
၂၊ စက်မှုစွန့်ပစ်ပစ္စည်း - စပျစ်သီး၊ ရှလကာရည်၊ သခွားအကြွင်းအကျန်၊ သကြားအကြွင်းအကျန်၊ ဇီဝဓာတ်ငွေ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ သားမွေးအကြွင်းအကျန်
၃။ စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်း - ကောက်ပဲသီးနှံ၊ ပဲပိစပ်၊ ချည်မှုန့်စသည်
4. အိမ်တွင်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်း - မီးဖိုချောင်အမှိုက်သရိုက်
၅၊ ရွှံ့နွံ: မြို့ပြရွှံ့နွံ၊ မြစ်ရေ၊ filter filter
ဒြပ်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင် ၀ င်ဆံ့နှစ်ခုပါ ၀ င်သောရောစပ်မှု၊ ပေါင်းစပ်ထားသောဓာတ်မြေသြဇာအသစ်၊ ဒေါင်လိုက်ကွင်းဆက်ကြိတ်ခွဲစက်၊ စည်ခြောက်အအေးခံစက်၊ စည်ဆန်ခါစက်၊ စက်နှင့်အခြားအရန်ပစ္စည်းကိရိယာများ။
ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းပစ္စည်းကိရိယာများကိုကျွမ်းကျင်သောထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအားတစ်နှစ်လျှင်တန်ချိန် ၁၀,၀၀၀ နှင့်တစ်နှစ်လျှင်တန်ချိန် ၂၀၀,၀၀၀ ထုတ်လုပ်သည့်လိုင်းများကိုပေးသည်။
၁။ အဆင့်မြင့်သောစည်ထုတ်စက်နှင့်အနှံ ၇၀% အထိမြင့်မားသည်။
၂။ သော့ချက်သောအစိတ်အပိုင်းများသည် ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည်။
၃။ rotary drum granulator သည် silicone (သို့) သံမဏိပြားများဖြင့်စီ ထား၍ ၎င်းပစ္စည်းသည်စက်၏အတွင်းနံရံကိုကပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။
4. တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှု၊ အဆင်ပြေသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသည်။
၆။ ပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ရေးအတွက်အမြီးဓာတ်ငွေ့ကိုကုသရန်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအခန်း (၂) ခန်းကိုသုံးပါ။
၈။ တစ်သမတ်တည်းရောနှောခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ အအေးခံခြင်း၊
ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်း၏ကုန်ထုတ်စီးဆင်းမှု - ကုန်ကြမ်းပါဝင်ပစ္စည်းများ→ကုန်ကြမ်းများရောနှောခြင်း→ granulation →ခြောက်သွေ့ခြင်း→အအေး→အချောထုတ်ကုန်စိစစ်ခြင်း→ပလပ်စတစ်အမှုန်အပိုင်းအစများ→အပေါ်ယံလွှာ→ကုန်ချောထုပ်ပိုးခြင်း - သိုလှောင်ခြင်း။ မှတ်ချက် - ဤထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်ရည်ညွှန်းအတွက်သာဖြစ်သည်။
စျေးကွက် ၀ ယ်လိုအားနှင့်ဒေသဆိုင်ရာမြေဆီလွှာတွက်ချက်မှုရလဒ်အရယူရီးယား၊ ammonium နိုက်ထရိတ်၊ ammonium chloride၊ ammonium thiophosphate, ammonium phosphate, diammonium phosphate, calcium မိုးသည်းထန်စွာ၊ ခါးပတ်အကြေးခွံများမှတဆင့်အပိုပစ္စည်း၊ သဲလွန်စဒြပ်စင်များကိုအချို့သောအချိုးအစားတွင်ပါဝင်မှုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ဖော်မြူလာအချိုးအရ၊ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအားလုံးသည်ခါးပတ်များမှရောနှောခြင်းသို့ရောနှောစီးဆင်းသည်။ ဒါဟာဖော်မြူလာ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာနှင့်ထိရောက်သောစဉ်ဆက်မပြတ်ပါဝင်ပစ္စည်းများရရှိသည်။
၁ ။ ရောစပ်ပါ။
ပြင်ဆင်ထားသည့်ကုန်ကြမ်းများသည်အရောအနှောရောနှော။ တစ်သားတည်းဖြစ်ကာမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသော granular ဓာတ်မြေသြဇာအတွက်အုတ်မြစ်ချသည်။ တစ် ဦး ကအလျားလိုက်ရောနှောသို့မဟုတ် disk ကိုရောနှောယူနီဖောင်းရောနှောခြင်းနှင့်နှိုးဆော်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ရောနှောခြင်းနှင့်ကြိတ်ခွဲပြီးနောက်အညီပစ္စည်းသည်ခါးပတ်သယ်ဆောင်စက်မှဓာတ်မြေသြဇာအသစ်စက်စက်သို့သယ်ဆောင်သည်။ စည်၏စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုနှင့်အတူပစ္စည်းသည်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင်လှိမ့်နေသောလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထုတ်လွှတ်သော extrusion ဖိအားအောက်တွင်ပစ္စည်းသည်အမှုန်ငယ်လေးများထဲသို့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းလိုက်ပြီးပတ် ၀ န်းကျင်အမှုန့်များနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းနှင့်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောပုံသဏ္shapeာန်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ granules ။
အမှုန်အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုလိုအပ်ချက်များကိုမဖြည့်ဆည်းမီ granulation ပစ္စည်းများခြောက်သွေ့စေရန်လိုအပ်သည်။ လေမှုတ်စက်ကိုလှည့်သောအခါအတွင်းပိုင်းဓာတ်လှေကားပြားသည်မှိုအမှုန်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်မြှောက်ပြီးပစ်ချလိုက်သည်။ သို့မှသာပစ္စည်းသည်ပူသောလေနှင့်အပြည့်အဝထိတွေ့နိုင်ပြီးတစ်သမတ်တည်းခြောက်သွေ့သောပန်းတိုင်သို့ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ထုတ်လွှတ်သောဓာတ်ငွေ့များကိုဗဟိုထုတ်လွှတ်ပြီးစွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်စားသုံးမှုကိုလျှော့ချရန်လွတ်လပ်သောလေသန့်သန့်ရှင်းရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးသည်။
4. Granule အအေး:
ပစ္စည်းအမှုန်များခြောက်သွေ့သွားသောအခါ၎င်းတို့ကိုအအေးခံရန်အေးခဲသို့ပို့ရန်လိုအပ်သည်။ အအေးပေးစက်ကိုခါးပတ်သွယ်တန်းစက်ဖြင့်ခြောက်သွေ့သောစက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ အအေးသည်ဖုန်မှုန့်များကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ အအေးခံနိုင်စွမ်းနှင့်အပူစွမ်းအင်အသုံးချမှုကိုတိုးတက်စေပြီးအမှုန်များမှအစိုဓာတ်ကိုထပ်မံဖယ်ရှားနိုင်သည်။
ပစ္စည်းအမှုန်များကိုအအေးခံပြီးနောက်ကောင်းမွန်သောနှင့်ကြီးမားသောအမှုန်များအားလုံးကို roller tab မှ ဖြတ်၍ စစ်ဆေးသည်။ ခါးပတ်ပေါ်ကနေစက်မှရောနှော။ ရောစပ်သည့်အရည်သို့အရည်ထုတ်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများသည်ကုန်ကြမ်းများနှင့်ထပ်မံလှုံ့ဆော်ခံရပြီး granulated ဖြစ်သည်။ ကုန်ချောများကိုဓာတ်မြေသြဇာထည့်သည့်စက်ထဲသို့သယ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အမှုန်များ၏သက်တမ်းကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်နှင့်အမှုန်များပိုမိုချောမွေ့စေရန်အတွက်ယူနီဖောင်းအမှုန်များ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တစ်သမတ်တည်းအကာအကွယ်ပေးသောရုပ်ရှင်ကိုအသုံးပြုသည်။ ထုပ်ပြီးနောက်, ဒါဟာထုပ်ပိုး - ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအတွက်နောက်ဆုံး link ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအလိုအလျောက်အရေအတွက်ထုပ်ပိုးစက်ကိုချမှတ်။ စက်တွင်အလိုအလျောက်အလေးချိန်စက်၊ သယ်ဆောင်စက်၊ တံဆိပ်ခတ်စက်စသည်တို့ပါဝင်သည်။ သင်သည်ဖောက်သည်များကိုဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရလည်းပြုပြင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာနှင့်ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာကဲ့သို့သောအမြောက်အများထုပ်ပိုးထားသောပစ္စည်းများထုပ်ပိုးမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည်။